Ciyaaro lagu dhaawacmay - BBC Somali
Ciyaaro lagu dhaawacmay
Image caption Rabshado ka dhacay ciyaar saaxiibtinimo gudaha South Africa
Iyadoo maalmo ka hadhsan yihiin bilowga Koobka Aduunka ee Kubada Cagta ee ka dhacaya dalka South Africa, ayaa ugu yaraan toban qof ay ku dhaawacmeen ciyaar saaxiibtinimo ah oo oo dhexmaraysay laba koxood oo ka qayb qaadanaya ciyaarahaas.
Labada Kooxood ee wadamada Nigeria iyo North Korea ayaa ciyaartaas wada ciyaarayey.
Nin belaska ka tiran ayaa ka mid ahaa dadka cusbitaalka loo qaaday. Shilkan ayaa ka dhacay magaalo isku raran ah oo ku taala duleedka Johanesburg, markii dad taageerayaal ah ay sku dayeen in ay isku cidhiidhyaan garoonka Makhulong, ka dib markii albaabada la xidhay.
Qaar taageerayaasha ka mid ah ayaa dhulka ku dhacay, oo ay dadku jiidheen.
Mar kale ayaa dadku is-jiidheenmarkii albaabada la furay.